One of Japan kasị ukwuu ngwá electronic echekwa Yamada Denki ugbu a na-anabata Bitcoin
Yamada Denki, otu n'ime Japan kasị ukwuu ngwá electronic echekwa, ka a mara ọkwa na ha na-anara Bitcoin dị ka a ugwo usoro.
Ha na-na mmekorita ya na Bitflyer, na-echeta ndị ọhụrụ mmepe, Bitflyer na-enye onyinye nke 500 yen mbụ 500 ahịa na-akwụ ụgwọ na virtual Forex.
South Korea si na-ere ahịa na e-azụmahịa ibu WeMakePrice ịnabata 12 cryptocurrencies
of kePrice, mma mara dị ka Wemepu, otu n'ime South Korea kasị ukwuu e-azụmahịa nyiwe na isi Jeriko na-eme atụmatụ na-anabata 12 cryptocurrencies, tinyere Bitcoin, na mmekota na Bithumb, mba kasị cryptocurrency exchange.
WeMakePrice na-agbakwunye cryptocurrencies ya ẹdude ịkwụ ụgwọ n'elu ikpo okwu OneThePay. Ozugbo mwekota zuru ezu, ẹdude WeMakePrice ọrụ ga-enwe ike ịzụta ihe na ọrụ site na iji cryptocurrencies.
Na N'ajụjụ ọnụ South Korean mainstream media tinyekwa HanKyoReh, a WeMakePrice ọnụ na-ekwuchitere kwuru na ụlọ ọrụ abịawo mkpebi nke tụnyere cryptocurrencies ka a akụkụ nke a buru ibu ụzọ mfe ugwo usoro maka n'ozuzu na-eji ọkụ.
"…ka ịkwụ ụgwọ ihe adaba n'ihi na anyị na-eji ọkụ na ahịa. Anyị tụlee mobile fintech apps, ihe, na cryptocurrencies dị ka ịrụ ọrụ nke ọma ịkwụ ụgwọ ụzọ,"Ka ọnụ na-ekwuchitere.
The ụlọ ọrụ si ukara na nkwupụta kwuru: "Bitcoin ugwo ọrụ… mma ọrụ na mma. "
BTCC enwetara site na Hong Kong dabeere blockchain ego enweta ego
Bitcoin Ngwuputa na mgbanwe conglomerate BTCC e nwetara site na-na-akpọghị aha Hong Kong dabeere blockchain ego enweta ego. The ego ga-enyere Fund BTCC mba na-elekwasị anya dị ka ọ na-eche nche na ndị Chinese ahịa.
BTCC azụmahịa e decimated site a usoro iwu mgbape-ala na China, nke iwu cryptocurrency trading na mgbanwe dabeere na mba. Beijing ugbu a nwere Bitcoin Ngwuputa ya egbe nlegharị anya, dị ka na-adịbeghị anya na-akọ na Ft na n'ebe ndị ọzọ.
A spokeswoman maka BTCC kwuru: “Anyị ugbu a na-na-na-atọhapụ ndị ozi na ego ma ọ bụ ego nke ego na-akpọlite.”
The BTCC mgbanwe ahịa karịa $25 ijeri uru nke mkpụrụ ego 2017. BTCC si Mobi wallet, nke e ẹkenam ke March 2017, ugbu a nwere ahịa si 180+ mba, kwukwara spokeswoman.
Na a kwuru BTCC ngalaba-nchoputa Bobby Lee kwuru: “Taa nnweta bụ ihe ịrịba milestone maka BTCC na validates niile anyị na-arụsi ọrụ ike na n'oge gara aga afọ ole na ole. M nnọọ obi ụtọ banyere ego a na-enye BTCC ịkwaga kpu aggressively na-eto eto anyị ulo oru 2018 na karịrị.”